SONATA-CANTATA: December 2009
ပထမဦးဆံုးေတြ…ဆိုတဲ့ တဂ္ပို႔စ္ အခုခ်ိန္မွ ေရးရရင္ေကာင္းမယ္။ မသီတာမွာ ေရးစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနလို႔...
ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခမွာ လိႈင္းမစီးခဲ့ဘူး။ ေရမကူးတတ္ေပမဲ့ ေရေၾကာက္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး…။ ျပည္ေတာ္ျပန္ခရီးမွာ ႐ႈိးထုတ္မယ္ဟဲ့ အႀကံနဲ႔ စကၤာပူေဒၚလာ၁၂၀ အကုန္အက်ခံၿပီး ေျဖာင့္သြားရတဲ့ ဆံပင္ေတြ နာကုန္မွာ စိုးလို႔ပါ။ မိုက္လံုးႀကီးလွတဲ့ ဒင္း ျမန္မာျပည္မွာ က်ပ္ေငြ တေသာင္းခြဲနဲ႔ ေျဖာင့္လို႔ရတာ သူေလးမသိရွာဘူး။ ဘာရမလဲ မသီတာ ႏွစ္ခါနာရင္ နာပါေစ ဆိုၿပီး ထပ္ေျဖာင့္တာေပါ့။
ေခ်ာင္းသာခရီးအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေတာ့ မေရးလိုေတာ့ဘူး... စိတ္မေကာင္းစရာေတြသာ ပါလာေတာ့မွာမို႔ပါ။
သားငယ္ေလးနဲ႔ ရြယ္တူ အျဖဴအစိမ္း၀တ္ကေလး လြယ္အိတ္ေလးကို စလြယ္သိုင္းလြယ္လို႔ ေက်ာင္းမသြားမီ သူ႔အေမလုပ္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ အုန္းလက္ဦးထုတ္ေတြ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ လိုက္ေရာင္းေနတာေတြ...
တခရီးတဲ့ အတူသြားၾကတဲ့ ကားေပၚကခရီးေဖာ္ေတြ တဦးကိုတေယာက္ မေခၚမေျပာႏိုင္ မရယ္မၿပံဳးႏိုင္ၾကေတာ့႐ံုသာမက ရန္လိုေစာင္းေျမာင္းတဲ့ စကားလံုးေတြ ေျပာထြက္ႏိုင္ၾကတာေတြ... (ေဖာ္ေရြရင္းႏွီးခင္မင္တတ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ...ဘယ္ဆီကို ေရာက္ေနၿပီလဲ)
အျပန္ခရီး ဂိတ္ဆံုးေရာက္ေတာ့ ကား၀မ္းဗိုက္ထဲထည့္လာခဲ့တဲ့ ခရီးေဆာင္အိတ္နဲ႔ စားစရာေတြ ထည့္ထားတဲ့ ဆြဲျခင္း မရွိေတာ့တာကို တာ၀န္ခံက အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုျခင္းမရွိပဲ... အဖိုးမတန္ရင္ ထားလိုက္ပါေတာ့လို႔ ၿပီးစလြယ္ တာ၀န္မယူတတ္ပံုေတြ... တိတ္တိတ္ေလး ခ်န္ထားလိုက္ေတာ့မယ္ေနာ္...။
(ပစၥည္းေတြ ျပန္ရခဲ့ပါတယ္။ စပယ္ယာက ေရွ႕က ဆင္းသြားႏွင့္တဲ့ ခရီးသည္ေတြဆီမွာ မွားခ်ေပးခဲ့တာေလ...)
(ျမန္မာျပည္သား)ေဆြမ်ိဳးေတြကို ႏွလံုးသား သံစဥ္ခ်ိဳခ်ိဳေလးေတြေပးဆပ္တဲ့ ခ်စ္ရတဲ့ အႏုပညာရွင္ ေမဆြိရဲ႕ စတိတ္႐ိႈးပြဲကို အမ်ိဳးသားကဇတ္႐ံုမွာ ၾကည့္႐ွဳခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားကဇတ္႐ံုကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ေရာက္ဖူးျခင္းပါ။ အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲကို တႀကိမ္တခါမွ ဖိတ္ၾကားျခင္း မခံခဲ့ရဘူးေလ…း)
မေဆြကို ခ်စ္ၾကတဲ့သူေတြ တခဲနက္ လာအားေပးတယ္။ မသီတာတို႔က ေနာက္ဆံုးတန္းက အားေပးတာ… အေပၚထပ္ကေပါ့။ က႑ေတြခြဲၿပီး သီခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးဆိုတယ္။ ဂ်ပ္ဆင္ထိပ္က လရိပ္ျပာနဲ႔ အဓိပတိလမ္းက ေျခရာမ်ား သီခ်င္းေတြ ဆိုခဲ့တဲ့ မေဆြကို ေက်းဇူးအထူးတင္တယ္။
ေနာက္ဆံုး “ကမ္းစပ္ … တို႔ဟာ ကမ္းစပ္…မင္းဟာ ေရလႈိင္းေလးေပါ့ အခ်စ္ရယ္…” သီခ်င္းကို ဆိုရင္း မေဆြက ပရိသတ္ေတြၾကား လိုက္ႏႈတ္ဆက္တယ္။
မသီတာတို႔လည္း အေပၚထပ္က ဆင္းလာၿပီး ေအာက္ထပ္ကို ၀င္ေတာ့ လားလား အရိသတ္ေတြက အေပါက္၀အထိ အံုခဲလို႔… တိုးေ၀ွ႔ ၀င္မေနေတာ့ပါဘူးေလ ဆိုၿပီး အေပါက္၀နားေလးကပဲ ေျခဖ်ားေထာက္ ရပ္ၾကည့္ေနတုန္း မေဆြကို လာအားေပးတဲ့ သူ႔ရဲ႕ အႏုပညာ ေမာင္ႏွမ အခ်ိဳ႕က ျပန္ဖို႔ ထြက္လာေနၾကၿပီ…။ စိတ္ထဲကေန မေဆြကို အနီးကပ္ ႏႈတ္ဆက္ခြင့္မရလဲ အနားေရာက္လာတဲ့ အကယ္ဒမီ ကိုxxx ကိုပဲ… အခုလိုေတြ႔ရတာ ၀မ္းသာေၾကာင္းေလး… ဟ မလို႔ရွိေသး… မ်က္လံုးျခင္း ဆံုလိုက္တဲ့ ခဏမွာ…။ အို ငါ… ငါက သူလို လူ မဟုတ္သလိုပဲ... သူ႔ရဲ႕ attitute ကို ေအာ္တိုမစ္တစ္ ဘာသာျပန္လိုက္မိတယ္…။
“ေအာ္ အႏုပညာသည္သာ ျပည္သူအတြက္ေလ… အႏုပညာရွင္ကေတာ့ ျပည္သူအတြက္မွ မဟုတ္ပဲ…”
သူတို႔က ဘာမို႔လဲ… ငါတို႔ကေတာ့ ခ်စ္လိုက္ရတာ ဆိုၿပီး မသီတာလည္း ပုထုဇဥ္ဆိုေတာ့ တခဏအတြင္း စိတ္ဆိုးသြားလိုက္တာ…။ သူတို႔ေတြ သံုးေလ့ရွိတဲ့ အႏုပညာ ေမာင္ႏွမေတြ… ဆိုတဲ့ စကားလံုးမ်ိဳး… တို႔ ဘေလာ့ဂါေတြလည္း သံုးေလ့ရွိတယ္။ ဘေလာ့ဂ္ေမာင္ႏွမေတြဆိုတဲ့ စကားလံုးမ်ိဳး ေနာင္ေသာအခါ မသီတာ ဘယ္ေတာ့မွ မသံုးေတာ့ဖို႔ ဆံုးျဖတ္မိတယ္။ ငါက ဘေလာ့ဂ္အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ပဲ ေဆြမ်ိဳးေတာ္ခ်င္သူမဟုတ္… ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သား အားလံုးနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးေတာ္ခ်င္သူ…။
အဲ့ဒီပြဲကို လာတဲ့ (စင္ေပၚပါတတ္တဲ့) မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္ရဲ႕ ဖက္ရွင္ DVD ေခြထြက္လာေတာ့ ပရိသတ္ႀကီး ႐ႈစားၾကရမွာပါ။ အဲ့လို ဖက္ရွင္မ်ိဳးပဲ ေတြ႔ခဲ့ရေသးတာက... မသီတာ စကၤာပူကို ျပန္လာတဲ့ခရီးမွာ ေလယာဥ္ေပၚ တက္ဖို႔ waiting room ထဲအ၀င္ အေကာက္ခြန္ကလို႔ ထင္ရတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက မသီတာရဲ႕ ေဘးလြယ္အိတ္ကို “ခဏဖြင့္ျပပါ” ေျပာလို႔ ဖြင့္ျပေနတုန္း… ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး xxx…xxx ဆိုၿပီး ၀န္ထမ္းေတြ တေယာက္ကို တေယာက္ လက္ဆင့္ကမ္းသံႏွင့္အတူ မွန္ျပတင္းေပါက္နား အေျပးအလႊား တန္းစီရပ္လိုက္ၾကတာမ်ား… ယူနီေဖာင္းေလးေတြနဲ႔ ဆိုေတာ့ တပ္စု ညာညွိလိုက္သလိုပဲ။ မသီတာလည္း ကိုယ့္အိတ္ေလး ကဗ်ာကယာပိတ္ၿပီး မွီသေလာက္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဆိုက္ေရာက္ ေလယာဥ္ေပၚကေန ဆင္းလာတဲ့ ေသးေသးသြယ္သြယ္ အမ်ိဳးသမီးေလး တေယာက္ရဲ႕ ေနာက္ေက်ာကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ေပါင္လံုးေလးေတြက မသီတာ မ်က္လံုးကၽြတ္က်ခ်င္စရာ…။
ေအာ္…Power of Art … ကို အလြဲသံုးစား လုပ္ရက္ၾကပေလ…။
မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော နိကာယ်ငါးရပ် ဒေသနာတော်တို့အား အကျဉ်းရုံးလိုက်ပါက “သီလ, သမာဓိ, ပညာ” ဟူသော ကျင့်စဉ်သုံးပါး ရသည်။ ထိုဒေသနာတော်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်သည်ကား နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည်။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ခေါ် ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂအဋ္ဌကထာသည် နိကာယ်ငါးရပ်နှင့် အဖွင့် အဋ္ဌကထာကျမ်းများ၏ အနှစ်သာရကို စနစ်တကျ အကျဉ်းခြုံးကာ ထေရဝါဒနည်းအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပြထားသည့် စင်ကြယ်ခြင်းတည်းဟူသော နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း ကျင့်စဉ်ကျမ်း (ဝိသုဒ္ဓိ - စင်ကြယ်ခြင်း + မဂ္ဂ = လမ်း) ဖြစ်၏။ ကျမ်းပြုသူမှာ နိကာယ်ငါးရပ်၏ အဖွင့်အဋ္ဌကထာ ကျမ်းပေါင်းများစွာကို ပြုစုခဲ့၍ ဗုဒ္ဓမတညု (မြတ်စွာဘုရား၏ အလိုတော်ကို သိသူ) ဟု တင်စား ခေါ်ဆိုခံရသူ အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသမထေရ် ဖြစ်သည်။ သီဟိုဠ်နိုင်ငံ အနုရာဓပူရမြို့ မဟာဝိဟာရ ကျောင်းတိုက်မှ သံဃပါလမထေရ်၏ တိုက်တွန်း ပန်ကြားချက်အရ သာသနာက္ကရာဇ် ၉၇၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ရေးသားပြုစုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သီလေ ပတိဋ္ဌာယ နရော သပညော, စိတ္တံ ပညဉ္စ ဘာဝယံ။
အာတာပီ နိပကော ဘိက္ခု, သော ဣမံ ဝိဇဋယေ ဇဋန္တိ။
(သံ-၁-၂၃၊ သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်၊ ဒေဝတာသံယုတ်၊ သတ္တိဝဂ်၊ ဇဋာသုတ်)
“ပညာရှိသည် သီလကို တည်၍ ပူပန်စေမှု(လုံ့လ)ရှိလျှက် ရင့်ကျက်သည် (ဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိသည်) ဖြစ်၍ စိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပညာကိုလည်းကောင်း ပွားစေသော် ထိုရဟန်းသည် ဤအရှုပ်အထွေးကို ရှင်းနိုင်ပေ၏။”
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာသည် သဂါထာဝဂ္ဂ သံယုတ်ပါဠိတော်လာ အထက်ပါ ဂါထာအားမူတည်၍ သီလ, သမာဓိ, ပညာဟူသော သိက္ခာသုံးရပ်ကို အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဆိုထားသည့် “အဋ္ဌကထာ” ဖြစ်သည်။ သီဟိုဠ်ဘာသာဖြင့် ရှိနေသော နိကာယ်ငါးရပ်၏ ရှေးအဋ္ဌကထာဟောင်းများကို ကိုးကား အနှစ်ထုတ်ကာ ဖွင့်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်၍ နောင်တွင် နိကာယ်တစ်ခုစီ၏ အဋ္ဌကထာကျမ်းများ ပြုစုသောအခါ အကျယ်ကို ဝိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာတွင် ကြည့်ရန် ပြန်လည် ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။
သီလ, ဓုတင်, အလုံးစုံသော ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ စရိုက်အစီအရင်နှင့် တကွသော ဈာန် သမာပတ်အကျယ်ကို လည်းကောင်း၊ အလုံးစုံသော အဘိညာဉ်, ပညာကို ပေါင်း၍ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ခန္ဓာ, ဓာတ်, အာယတန, ဣန္ဒြေ, အရိယသစ္စာ လေးပါးတို့ကို လည်းကောင်း၊ ကောင်းစွာ စင်ကြယ်၍ နက်နဲသိမ်မွေ့သော ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာ၊ ပါဠိတော်အစဉ်လာကို မလွတ်သော ဝိပဿနာဘာဝနာပွားများနည်းတို့အား ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းတွင် ပြည့်စုံ စင်ကြယ်စွာ ဆိုအပ်ခဲ့ပြီ။ ထို့ကြောင့် ဤအဋ္ဌကထာတွင် အပိုထပ်မံ၍ စိစစ်ခြင်း မပြုတော့။ (သုတ္တန္တ နိကာယ် လေးရပ် အဋ္ဌကထာများ၏ ကျမ်းဦးအဖွင့်အမှာစာများ)
ထို့အပြင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ရှင်မဟာကဿပစသော မထေရ်ကြီးများ၏ အစဉ်အဆက် မဟာဝိဟာရ ကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးကြသော မထေရ်ကြီးများ၏ ဒေသနာနည်းကိုမှီကာ အခြားသော ဂိုဏ်းများ၏ အယူဝါဒနှင့် မရောထွေးစေပဲ စင်ကြယ်စွာ ဖွင့်ဆိုထားပါသည်ဟု ကျမ်းပြုဆရာက မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုခေတ်က သီဟိုဠ်နိုင်ငံတွင် အဘယဂီရိကျောင်း, ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တို့တွင် ထေရဝါဒကျမ်းစာများအပြင် အခြားသော ဝေတုလ္လဂိုဏ်း, ဓမ္မရုစိဂိုဏ်းတို့မှ ကျမ်းစာများနှင့် မဟာယာနကျမ်းစာများကိုပါ ရောနှော သင်ကြား ပို့ချလျှက်ရှိကြ၏။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းတွင် မဟာဝိဟာရဝါသီ မထေရ်တို့၏ အယူနှင့် ဆန့်ကျင်သော အယူဝါဒကွဲများအားလည်း အလျဉ်းသင့်သလို ဖော်ထုတ်ကာ အကျိုးအကြောင်းနှင့်တကွ ချေဖျက်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် နိကာယ်ငါးရပ် အနှစ်သာရအား ထုတ်နှုတ်၍ ထေရဝါဒနည်းအရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ လက်စွဲကျမ်းတစ်ဆူဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းသည် အရွယ်ပမာဏအားဖြင့် ၅၈ ဘာဏဝါရရှိ၍ အခန်းပေါင်း ၂၃-ခန်း ပါဝင်သည်။ (မရပ်နားပဲ တကြိမ်တည်းရွတ်ဆိုနိုင်သော ပမာဏအား တစ်ဘာဏဝါရဟုခေါ်၍ အက္ခရာအလုံးရေ ရှစ်ထောင်ရှိသည်။) မဇ္ဈိမနိကာယ် မူလပဏ္ဏာသပါဠိတော်၊ သြပမ္မဝဂ်၊ရထဝိနီတသုတ် (မ-၁-၂၅၂) တွင်လာသော ဝိသုဒ္ဓိ (စင်ကြယ်ခြင်း) ၇-ပါး အစီအစဉ်ဖြင့် ကျမ်းကိုရေးသားပြုစုထား၍ ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂဟု ခေါ်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
အခန်း ၁ နှင့် ၂ တွင် သီလအမျိုးမျိုးတို့နှင့်တကွ ဓုတင် ၁၃-ပါးအား အကျယ်ဖွင့်ဆိုထား၏။ သီလဝိသုဒ္ဓိ (အကျင့်စင်ကြယ်ခြင်း) အပိုင်းဖြစ်သည်။
အခန်း ၃ မှ ၁၁ အထိ အခန်းများမှာ ကမ္မဋ္ဌာန်း ၄၀ အား အကျယ်ပြဆိုထားသည့် စိတ္တဝိသုဒ္ဓိ (စိတ်စင်ကြယ်ခြင်း) အပိုင်းဖြစ်သည်။ ရှေးဦးစွာ ကြိုတင်ဖယ်ရှားထားရမည့် ပလိဗောဓ ခေါ် သမာဓိဘာဝနာ၏ အနှောက်အယှက်၁၀-ပါး, ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယဆရာ, စရိုက်အလိုက် ကမ္မဋ္ဌာန်းပေးခြင်း, ဈာန်သမာပတ်များရသည့်တိုင် သမာဓိဘာဝနာ ပွားများ အားထုတ်နည်းအမျိုးမျိုးတို့ကို ဖွင့်ဆိုထားသည်။
အခန်း ၁၂ နှင့် ၁၃ တွင် သမာဓိဘာဝနာကို ပေါက်မြောက်အောင် ပွားများပါက ရရှိလာနိုင်မည့် ဣဒ္ဓိဝိဓ (တန်ခိုးဖန်ဆင်းမှုအမျိုးမျိုး) နှင့် အဘိညာဉ် (ထူးသောအသိဉာဏ်) အကြောင်းတို့အား ဖွင့်ဆိုထားသည်။
အခန်း ၁၄ မှ ၁၇ အထိတွင် ပညာ၏ အခြေခံဖြစ်သော ခန္ဓာ, အာယတန, ဓာတ်, ဣန္ဒြေ, သစ္စာ, ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တို့၏ သဘောတရားကို ရှင်းလင်းထားသည်။ ရှေ့အခန်းများတွင် ဖော်ပြခဲ့သော သီလဝိသုဒ္ဓိနှင့် စိတ္တဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးသည် သစ်ပင်၏ အမြစ် (မူလ) နှင့်တူ၏။ ပညာ၏ အခြေခံမြေလွှာ (ပညာဘူမိ) နှင့်တူသော ခန္ဓာ, အာယတန စသည်တို့အား နားလည်သဘောပေါက်အောင် မေးမြန်းသင်ယူလေ့ကျက်ပါက ထိုမြေလွှာပေါ်တွင် အပင်၏ ကိုယ်ထည် (သရီသ) နှင့်တူသည့် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစသော ကျန်အဆင့်မြင့် ဝိသုဒ္ဓိတရားများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပေမည်။ စာသိ, သဘောတရားသိအားဖြင့် သိအပ်သည်တို့ကို ပိုင်းခြားသိခြင်း (ဉာတပရိညာ) အပိုင်းဟုလည်း ခေါ်နိုင်သည်။
နောက်အခန်းများတွင် စာသိ, သဘောတရားသိမှသည် ကိုယ်တိုင် ရှုမှတ်ပွားများဆင်ခြင်၍ သိသော အသိသို့ ကူးပြောင်းရန် နည်းနိဿယများကို ဖော်ပြထားသည်။ အခန်း ၁၈တွင် နာမ်ရုပ်တရားတို့ကို ပိုင်းခြားသိမြင်သော ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ (အမြင်စင်ကြယ်ခြင်း)၊ အခန်း ၁၉ တွင် နာမ်ရုပ်တရားတို့၏ အကြောင်းတရားကို သိမြင်သော ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ (ယုံမှားခြင်းလွန်မြောက်၍ စင်ကြယ်ခြင်း)၊ အခန်း ၂၀ တွင် ရုပ်နာမ်တရားတို့အား အနိစ္စ, ဒုက္ခ, အနတ္တဟု လက္ခဏာရေးသုံးပါးတင်၍ ရှုမှတ်သော သမ္မာသနဉာဏ်, မဂ်တုစသော ဝိပဿနာညစ်ညူးကြောင်းတရား, မဂ္ဂါမဂ္ဂဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ (လမ်းမှန်လမ်းမှားသိမြင်၍ စင်ကြယ်ခြင်း)၊ အခန်း ၂၁ တွင် ဖြစ်ပျက်မြင်သည့် ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်မှသည် မဂ်တရားနှင့်လျော်သော အနုလောမဉာဏ်, ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ (အကျင့်လမ်းမှန်ကို သိမြင်စင်ကြယ်ခြင်း) တို့ကို ဖွင့်ပြထားသည်။
အခန်း ၂၂ ဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသတွင် သောတာပတ္တိမဂ်, သကဒါဂါမိမဂ်, အနာဂါမိမဂ်, အရဟတ္တမဂ်ဟူသော မဂ်လေးပါး, ဗောဓိပက္ခာယတရား ၃၇-ပါး, မဂ်ဉာဏ်တို့က အသီးသီးပယ်သတ်သော ကိလေသာ, သံယောဇဉ်စသော တရားများအား ဖွင့်ပြသည်။
အခန်း ၂၃ ပညာဘာဝနာ အာနိသံသနိဒ္ဒေသအခန်းတွင် ပညာဘဝနာ၏ အကျိုးရလဒ်ဖြစ်သော ဖလသမာပတ်, နိရောဓသမာပတ်နှင့် နိဗ္ဗာန်တရားတို့ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာကျမ်း၏ ခက်ခဲသောအနက်များကို အဖွင့်ဆိုသည့် ပရမတ္ထမဉ္ဇူသာ (ဝိသုဒ္ဓိမဂ်မဟာဋီကာ) ကျမ်းကို ဒုတိယအဋ္ဌကထာဆရာဟု တင်စားခံရသည့် အရှင်ဓမ္မပါလမထေရ် ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်၌ ပယ်ထားသော အချက်အလက်တို့၏ ကျမ်းစာ, ကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်, ဂိုဏ်းစသည်တို့ကို မဟာဋီကာကျမ်းက အတိကျ ဖော်ထုတ်ပြထားသည်။ အရှင်မဟာနာမထေရ် ရေးသားပြုစုသော သဒ္ဓမ္မပကာသနီ (ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ္ဂပါဠိတော်၏ အဖွင့် အဋ္ဌကထာ) ကျမ်းတွင် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်အဆိုအချို့အား ဝေဖန်ထားသည်များရှိရာ၊ အရှင်ဓမ္မပါလက မဟာဋီကာတွင် ပြန်လည် ချေပရေးသားထားသည်။ အရှင်ဓမ္မပါလသည် မဟာဋီကာတွင် နေရာအတော်များများ၌ ယုတ္တိဗေဒနည်းများသုံး၍ ဝေဖန်တတ်သည်။ ထိုခေတ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ထင်ရှားခဲ့သည့် နျာယ, ဝိသေသိက, သင်္ချ, ယောဂ, မီမံသ, ဝေဒန္တစသော ဒဿနဂိုဏ်း ၆-ဂိုဏ်းတို့၏ အယူဝါဒများနှင့်လည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးထားသည်။ သို့သော် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းတွင်ကဲ့သို့ ပုံဝတ္ထုများဖြင့် တန်ဆာဆင်၍ ရေးသားခြင်းမပြုခဲ့ပေ။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာအား ပြည်ဆရာတော် အရှင်မေဓာလင်္ကကာရက “ပါဠိတစ်ချက်-မြန်မာတစ်ချက်” တွဲ၍ နိဿယဘာသာပြန်ခဲ့သည်။ ကျိုက်ထိုမြို့ ဘုရားသုံးဆူဆရာတော် အရှင်နန္ဒမာလာသည် “ဝိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာ မြန်မာပြန်ကျမ်း” ဟူသောအမည်ဖြင့် မြန်မာဘာသာ သက်သက်ဖြင့် ရေးသားခဲ့ဖူးသည်။ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရား ရေးသားပြုစုခဲ့သော “ဝိသုဒ္ဓိမဂ်မြန်မာပြန်” ကျမ်းမှာ ထင်ရှား အသုံးများသည်။ ညောင်လေးပင်တောရဆရာတော် ရှင်အရိယ၏ “ဝိသုဒ္ဓိမဂ်အရသာ”, ဆရာဦးသော်ဇင်၏ “ဝိသုဒ္ဓိမဂ်” တို့သည် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာအား အကျဉ်းခြုံး ဘာသာပြန်ထားသော ကျမ်းများဖြစ်သည်။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာအား ဆရာဦးဖေမောင်တင်က “The Path of Purity” ဟူသောအမည်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ဆိုကာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ပါဠိကျမ်းစာအသင်း (PTS) က ၁၉၂၂-ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နောင်တွင် ထပ်မံပုံနှိပ်ခြင်းမပြုတော့၍ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ရဟန်းတော် ဘိက္ခုဉာဏမောဠိက မိမိကိုယ်တိုင် အသုံးပြုရန် မှတ်စုသဘောအဖြစ် ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပြန်လည် တည်းဖြတ်ကာ “The Path of Purification” ဟူသောအမည်ဖြင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးအသင်း (BPS) က ၁၉၅၆-ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
The Path of Purification, Translated from the Pali by Bhikkhu Nanamoli - pdf
ဦးသော်ဇင် - ဝိသုဒ္ဓိမဂ် (အကျဉ်းချုပ်ဘာသာပြန်) - pdf
မဟာစည်ဆရာတော် - ဝိသုဒ္ဓိမဂ် မြန်မာပြန် ပဌမတွဲ - pdf
မဟာစည်ဆရာတော် - ဝိသုဒ္ဓိမဂ် မြန်မာပြန် ဒုတိယတွဲ - pdf
မဟာစည်ဆရာတော် - ဝိသုဒ္ဓိမဂ် မြန်မာပြန် တတိယတွဲ - pdf
မဟာစည်ဆရာတော် - ဝိသုဒ္ဓိမဂ် မြန်မာပြန် စတုတ္ထတွဲ - pdf
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာကဲ့သို့ပင် သီလ, သမာဓိ, ပညာကို အကျယ်ဖွင့်သည့် ကျမ်းတစ်စောင် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ထက် စော၍ ပေါ်ထွန်းခဲ့ဖူးသည်။ အရှင်ဥပတိဿမထေရ် ပြုစုသော “ဝိမုတ္တိမဂ်အဋ္ဌကထာ” ကျမ်းဖြစ်သည်။ ဝိမုတ္တိမဂ်ကျမ်းမှ အချက်အချို့အား ဝိသုဒ္ဓိမဂ်တွင် ရှင်ဗုဒ္ဓဃောသက ဧကစ္စေဝါဒ (အချို့၏ အယူအဆ) ဟူ၍ ပယ်ဖျက်ခဲ့၍ မဟာဋီကာ ဆရာက ထိုအချက်တို့သည် အရှင်ဥပတိဿပြုစုသော ဝိမုတ္တိမဂ်ကျမ်းမှ ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ထုတ်ပြသည်။ ဝိမုတ္တိမဂ်အဋ္ဌကထာ လာအယူအဆအချို့သည် အဘယဂီရိဝါသီတို့၏ အယူများဖြစ်သည်ဟု မဟာဋီကာဆရာက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဝိမုတ္တိမဂ်အဋ္ဌကထာကျမ်းသည် ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး တိမ်မြုတ်နေ၍ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၅၀၅-ခုနှစ်တွင် သံဃပါလမည်သော ရဟန်းတော်က တရုတ်ဘာသာ ပြန်ဆိုထားသည့်မူကို ပြန်လည်တွေ့ရှိရသည်။ ၁၉၆၁-ခုနှစ်တွင် အရှင်သောမထေရ်နှင့် အရှင်ခေမိန္ဒတို့က “Path of Freedom” ဟူသော အမည်ဖြင့် ဘာသာပြန်ကာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုလံဘိုမြို့တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်နှင့် ဝိမုတ္တိမဂ်ကျမ်းနှစ်စောင်၏ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်များအား P.V. Bapat ရေးသားသည့် Vimutti Magga and Visuddhi Magga – A Comparative Study နှင့် မဟာစည်ဆရာတော်, အနီးစခန်းဆရာတော်, တိပိဋကဓရဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တနှင့် တိပိဋကပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန်ကျမ်းပြု ဆရာတော် ဦးသီလာနန္ဒတို့ စုပေါင်းပြုစုခဲ့ကြသော “ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂနိဒါနကထာ” (ဝိသုဒ္ဓိမဂ်မြန်မာပြန်နိဒါန်း) တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
၁။ မဟာစည်ဆရာတော် - ဝိသုဒ္ဓိမဂ်မြန်မာပြန် နှင့် နိဒါန်း
၂။ Bhikkhu Ñānamoli – The Path of Purification
၃။ U Pe Maung Tin – The Path of Purity
၄။ အရှင်ကေလာသ - ဗုဒ္ဓစာပေ ကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ်များ
၅။ အရှင်ကေလာသ- ဝိမုတ္တိမဂ္ဂပါဠိမူ
၆။ P.V. Bapat – Vimuttimagga and Visuddhi Magga – A Comparative Study
၇။ Bhikkhu Anālayo – The Treatise on The Path of Liberation and the Visuddhi Magga